ခေတ်သစ် ဒေဝဒတ် | MoeMaKa Burmese News & Media
တိုးနှောင်မိုး ● နိုင်​ငံ​တော်​
နီဇူလိုင် - "ငြိမ်းချမ်းရေး"
ဆောင်းယွန်းလ ● စိတ်၏စေရာ
ဆောင်းယွန်းလ - သိမ်းထားလိုက်မိတဲ့ အပိုင်းအစများ (၁)
နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂
မမြင်ကွယ်ရာကပေမယ့် ရွှေရင်လွှာ နာလှပါရဲ့
ကြမ်းလိုက်တဲ့ အဖြစ် ….
မတရားတာ တရားစေဖို့ အများအပေါ်မှာ ငဲ့ညှာပါလေကွဲ့လို့
ဦးပိုင် တရုတ်ကို ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်တာ ဒီလိုအပြုတ် လုပ်ရက်စရာလား …
ယိုသူမရှက်ပေမဲ့ မြင်သူမှာ ရှက်လှပါရဲ့
ဒင်းစနက် ရွံလို့မုန်း ကြည့်ကြစမ်းပါအုံး …
သွေးရဲရဲနဲ့ မြတ်သံဃာ၊ ဆေးရုံမှာ အတုံးအရုံး …
ကိုယ်လုံးအထက် ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ အသက်ကို စတေး၊ ပြည်သူကို အလုပ်ကျွေးပြုခဲ့..
မရှုရက်နိုင်လှပေဘု သူ့လက်ချက် သူ့စနက်တွေက
ဘီးလူးသဘက် ၀င်ပူးနေသည့်နှယ် ….
အာဏာရယ် လက်ကိုင်တုတ်လုပ် တရုတ်ကို နဖူးတိုက်
ဦးပိုင်ကို ဦးခိုက်လို့ စူးစိုက် ရူးမိုက်မိုက်စရိုက်နဲ့
မီးတိုက်လို့အကြမ်းဖက် လုပ်ရက်လိုက်လေခြင်း …
အင်တာနက်သတင်းက မြင်ကွင်းကိုကြည့် မှင်တောင်သက်မိပါရဲ့…
ဒါလားဟဲ့ အစိုးရ … သူခိုးက လူအော်သလို
မင်းသားခေါင်းဆောင်းထားတဲ့ဘီးလူး … မထူးဇာတ်ခင်းနေသလား …
အစိုးရ ခေါ် မင်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ် စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူ့ရဲ မိုက်မဲလိုက်ပေခြင်း …
အခြေနေချင်းမတူလို့ ပြည်သူမှာခံပြင်းကာ စိတ်နာလှပေမဲ့ မာန်တင်းလို့အံကြိတ်ဖြေ ..
မကြာချေ ဒဏ်ပြန်ခတ်ပါလိမ့် …
ထိုအခါ မင်းသံဃာကို မတပါနဲ့
မင်းတို့ဟာ ကွန်မြူနစ်အတွေးတွေနဲ့ သံဃာတော်တို့သွေး မြေခစေသူမို့
ဒီအဖြစ် ဒီစနစ်တွေကြည့်ရင် မင်းတို့ဟာလေ ..ခေတ်သစ်ရဲ့ ဒေဝဒတ် …။